Tinye: Mmemme Innovation Smart (CIP) 2021 Maka mmalite ndị Tech Tech
Tinye: Mmemme Innovation Smart (CIP) 2021 maka mmalite mmalite nke Tech Tech
Ebe E Si Nweta: scipafrica.com
Obodo ndị mara mma bụ ọdịnihu nke mmepe obodo. N’Africa, a na-agba mbọ ka ọtụtụ mba bụ ijiri ikike nke teknụzụ ọhụrụ iji jikọọ, chekwaa ma bulie ndụ ụmụ amaala ha.
Na 2050, World Bank na-ebu amụma na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ndị mmadụ ga-ebi n’obodo; na eburu amụma a n'uche, a na-akpọ ndị mbido ọhụụ dị elu nke Africa na-arụ ọrụ n'ọhịa Smart Cities ka ha tinye akwụkwọ maka Mmemme Innovation Smart (SCIP).
Banyere SCIP 2021
Na mmekorita ya na gọọmentị Rwandan, Atụmatụ pụrụ iche na Ọzụzụ na Okike Job na Tech-Entrepreneurship Initiative "Make-IT in Africa" ​​ewepụtala SCIP iji kwado uto nke 30 kachasị atụ anya mmalite teknụzụ si Rwanda na mba ndị ọzọ Africa.
Ihe ngwangwa nke onwa isii nke kewara uzo 3 - Smart Mobility, Smart Housing & na Fintech for Affordability will take off in June and end in December 2021.
Ebumnuche SCIP na-akwado iji mmalite 30 ahọpụtara nwere ọkaibe ọkachamara na nka na njikọta iji wulite netwọkụ ha. Ha ga - enwe ike iji Green City Kigali, Rwanda mara ọkwa obodo mara mma, dị ka ezigbo ikpe iji nwalee azịza ha ma banye ahịa Rwandan.
Abamuru nke isonye
Tonweta netwọk nke ndị mmekọ ụwa, gụnyere ụlọ ọrụ ọha na eze na ndị na-etinye ego;
Ndị ọkachamara ọkachamara na azụmahịa na-elekọta ndị mmadụ nke ọma;
Ọpụrụiche pụrụ iche na ọzụzụ aka dabara adaba maka mkpa mmalite;
Ohere ịkparịta ụka n'andntanet na ịkọrọ ndị otu egwuregwu ihe ọmụma.
Iji ruo eruo maka isonye na mmemme ahụ, mmalite gị ga-:
Na-arụ ọrụ n'otu mba ma ọ bụ karịa n'Africa;
Gbado anya na ịnyefe ọhụụ ọhụụ amamịghe (Smart Mobility, Smart Housing, Fintech);
Meela ngwa ngwa ma ọ bụ ọrụ wee nwee ụgwọ ndị ahịa;
Nwee uto na ike okike;
Nwee mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya / ma ọ bụ gburugburu ebe obibi;
Mejupụtara otu ìgwè siri ike ma nwee mkpali.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ itinye akwụkwọ maka Smart Cities Innovation Programme (SCIP), dejupụta fọm ngwa ahụ Ebe a. Rịba ama na a ga-akpọ gị ka ị nyekwuo ozi gbasara azụmahịa gị ma sonye na ajụjụ ọnụ ma ọ bụrụ na ịhọrọ ngwa gị.
Ngwa imecha na Sọnde, Mee 9, 2021.